IINGCAMANGO EZINGAMA-73 ZETATTOO LETTERING IDEAS [2021 ISIKHOKELO SOKUPHEFUMLELWA] - UHLOBO
Iingcamango ezingama-73 zeTattoo Lettering Ideas [2021 Isikhokelo sokuphefumlelwa]
Inyani yile, onke amagama athethiweyo eza nendleko. Amandla amakhulu oluntu, isipho sokuthetha, sinokukhuthaza ngokulula ngokulula njengoko sinokutshabalalisa.
Xa kuziwa kwingcinga yeetattoo, umxholo awufani.
Zonke uyilo zinokucela ukuzonwabisa okanye umyalezo ngaphandle kokufuna ukunxibelelana nantoni na ngelizwi kwaphela. Umboniso womsebenzi wobugcisa uyathetha; ukuxelela ibali elivelisa amandla ethu okufuna ukwazi.
Nangona kunjalo, indlela yesiko yokubhala isasebenza kuluhlu lwee Iingcamango ezingama-50 + ezilungileyo ze tattoo , Nokuba uyilo lokwenyani olunokupeyinta amagama aliwaka kumfanekiso omnye. Ukusuka kumagama ukuya kwizicatshulwa, uphawu ngalunye oya kulufumana lubhaliwe kwezi zixhobo zingama-75 zibalaseleyo zokubhala iitattoo ziyahlangana ukuze zenze ubugcisa bomzimba obupholileyo.
Ngokuqinisekileyo, ukufundeka kunokuba buthathaka ngamanye amaxesha ngazo zonke iifonti zoyilo, izikripthi kunye nokuhombisa, nangona kunjalo, intsingiselo yala magama ihlala yomelele njengoko injalo xa kuthethwa. Ngale nto ithethwayo, ndiza kukubonisa indlela yokwenza amagama akho aphile ngezantsi.
Bona ngakumbi malunga - Ezona ziPhezulu zeTattoo eziPhambili ezili-135 zaMadoda
Iingcamango zokuBhala ngeTattoo
Ayinguye umlandeli omkhulu wegama lokuqala elingacacanga ifonti emnyama kodwa 'luhlaza okwesibhakabhaka' kumiswe ngokuqaqambileyo. Isitayile sokuthuka sicacile kwaye sihlwili. Unobumba wangaphakathi ugcwalisa kukuma, kunye negcisa lamkela i-chunky dot work hybrid yotshintsho olusuka kumanqatha omnyama asebenzela umgca kwileta nganye.
Esi sikripthi sibamba isiqalekiso ngo-B. Ayisiyonto eyahlukileyo ekuqaleni kwebali lakanye. Ukugcwaliswa kwegrey kusetyenziswe kakuhle, nangona i-B inokusebenzisa i-inki emhlophe ebalaseleyo ukuyenza iphume ngakumbi kuyo yonke ifonti yomvambo.
I tattoo yelanga igubungela izimvo
Ulungelelwaniso lwe tattoo. Umsebenzi womgca ubukhali, ukuthungwa kakuhle kumnyama kwileta enkulu. Ukusuka apho itshintshela kwisicatshulwa esicocekileyo sisebenzisa ubukhulu becala mnyama, sinombala ongwevu kufutshane nomphezulu wonobumba ngamnye. Sebenzisa indawo engalunganga njengombala wokugcwalisa i-alt ubonakalisa ubuchule obugqwesileyo kwaye unceda isiqwenga sibonise kakuhle.
Oku kugcwele tattoo esifubeni inefonti yokubulala kodwa kunzima kakhulu ukuyichaza. Kwimizekelo emininzi kubalulekile ukuba ukwazi ukufunda isicatshulwa ngokucocekileyo njengoko iskripthi sijongeka ngathi sihle-njengoko sisenza apha. I-tattooist ibonisa ubuchule obukhulu ekudaleni i-tattoo yefonti ye-3D ephantse ukuba itsiba kulusu lwesihloko, kwaye ibekwe kakuhle ijikeleza ecaleni kwesifuba kunokubeka iflethi.
Umbhalo opakishwe ngokuqinileyo kumxholo okhunjulwayo kukhunjulwa ukulahleka komntu osondeleyo okanye uyayixhasa iLiverpool FC Ngokuqinisekileyo kukho inki ye-futbol engaphezulu kulo mfana ukuba ngaba le yokugqibela injalo. Le yenziwe kakuhle, ihanjiswe kakuhle itattoo yesifuba esisebenzisa ukuhamba kakuhle. Inyani yokuba okude ujonga isiqwenga kunokuba lula ukuba kufundwe nako kuyanceda.
Enye into ekunzima ukuyifunda ifonti enesibindi, emnyama, kunye ne-chunky-icala lenza indawo elungileyo yokubhala okukhulu kwaye lenzakalise ngaphantsi kokufakwa uphawu kwiimbambo. Iskripthi esimnyama esityebileyo kunzima kakhulu ukuba sifundwe kunombhalo ophezulu, nangona kunjalo ukulandelelanisa kunye nokuqina kokubhala kujongeka kulunge ngakumbi.
Oku kupholile tattoo encinci ifonti. Njengokusetyenziswa kwe ubugcisa basesitratweni isitayile sokubhala unobumba ukuhambisa umyalezo ozayo wokufa. Luhlobo lobugcisa obupholileyo onokuthi umda kunye nendawo engalunganga okanye ubeke ngaphakathi kwebheji kwaye ungeze ngokulula.
Kulungile, ke le tattoo yomnxeba yinto enqabileyo enqabileyo kwiibhukumaka zebhayibhile. Xa ufunda le ndawo ilandelayo uya kusiqonda isizathu: Kwaye ndiqinisekile ukuba akukho nto inokuze isahlule eluthandweni lukaThixo. Nokuba kukufa nobomi, nazingelosi okanye iidemon, okanye uloyiko lwethu lwanamhlanje okanye amaxhala ethu ngomso- nditsho namandla esihogo awasohlukanisi nothando lukaThixo. Yindinyana yebhayibhile esebenza kubo bobabini abathambileyo nabanzima, ngalo mbandela onzima ufumana umvambo wesikripthi esimnyama kwindawo yakhe ekubhekiswa kuyo kumaRoma 8:38.
Thatha kwaye wenze uhlala usetyenziswa kwibhasikithi ngokubhekisele kwimizamo yokudubula, kodwa ngoku iya kufikelela kwiindawo ezininzi apho kubandakanyeka umngcipheko, umvuzo kunye nesibindi. Le tattoo isebenzisa iifonti ezahlukeneyo ezahanjiswa nge-grey scale shading, i-banner encinci, emva koko indawo engalunganga yokwenza umfanekiso obonakalayo onomdla.
Obu bukhulu bukhulu bokuqengqeleka kwetrave nkqo kujongeka kuyindumasi. Yonke imigca emnyama kunye nokuzaliswa kuyinika imeko yokuqina ngamanye amaxesha ayinakwenziwa kwiitattoos zefonti yamadoda, njengoko kuhlala kungekho ndawo ininzi yokusebenza. Njengokuhamba konobumba ngamnye ongunobumba omkhulu, bomelele kakhulu ngaphandle kokufuna ukuhanjiswa kwifonti eyahlukileyo kwabanye oonobumba.
Ndichithe ixesha elide ndizama ukufunda oku kodwa ngumgangatho womsebenzi omnyama we-3D. Esi siqwenga sesifuba sinika isiqalekiso esikhulu esinokungena kwindawo ethe kratya, ichazwe kakuhle. Ukuhanjiswa kwegcisa apha kukhethekile, ukuya kwiindawo ezingalunganga ze-alt kunye ne-sharpie efana ne-curls ezichumayo.
Eli linqanaba lomvambo tattoo. Xolela kodwa ungalibali ukubhala okukhulu nge-inki kulusu. Ukuba isifundo siyalibala, sisiphoso sakhe kuba unako; ungaphoswa ngulo myalelo. Uxolelwano lokuqalekisa kukubhala okumileyo kwesi siqwenga. Ijika elingenamsebenzi kunye nokuhamba, kwanakwisikali esikhulu kujongeka njengokuqaqamba. Umfanekiso awubonisi kakuhle, nangona kunjalo isicatshulwa esimnyama esityebileyo sokulibala sikwabonakala sihlambulukile kwaye simnandi, kwaye siza kudlala kamnandi ngokuchasene nabanye xa kubonisiwe konke. I-quibble kuphela inokuba lula kwinxalenye 'kodwa ungayenzi', it is too overdone with fancy block letters when Times New Roman can also work as well.
Lo ngumzekelo ongenasiphako weTatoo yefonti yeetatoo zamadoda. Ukuhamba ngokugqithileyo kulula kwaye kulula ukufundwa kwaye kugqwesileyo kwiinkcukacha zesithuba esingalunganga sokugcwalisa kunye nokulinganiswa kwangaphakathi okungwevu koonobumba ngokwabo. Imibhobho / ikrwela umgca ikwenziwe kakuhle kwaye yenze umda oluncedo nakweyiphi na into yobugcisa beengalo.
Iitatto zamadoda egxalabeni
Iikhola zethambo zamadoda emadodeni
Iingelosi zamaphiko tattoos emadodeni
iiTattoo zengalo engaphakathi yabasetyhini
intyatyambo yobomi be tattoo
Ixhama le-antler tattoo enamagama
imikhono ye tattoo epholileyo kubafana